Iyo yechipiri vhezheni yezvimedu zveRust driver driver paLinux yakatotumirwa | Linux Vakapindwa muropa
Muna Kurume wegore rino pane linux-rinotevera bazi umo panguva iyoyo yaishandira iyo Linux kernel 5.13, Seti yekutanga yezvinhu yakaverengerwa kugadzira madhiraivhoni e Mutauro Rust uye ikozvino chikumbiro chakaitwa kuti chibatanidze chechipiri shanduro yezvimedu kuti uwedzere Rust rutsigiro kuLinux kernel.
Munhu akatumira chikumbiro kune vanogadzira Linux ndiMiguel Ojeda, munyori weiyo Rust-ye-Linux chirongwa uye watakataura nezvake mazuva mashoma apfuura, kubvira paakapihwa basa rekutora chirongwa che "Prossimo" icho chaizvo inotarisa pakurongedza kuedza kufambisa yakakosha software zvivakwa kune yakachengeteka kodhi kuchengetedza iyo Linux kernel memory neRust (kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve chirongwa, unogona kubvunza kutumira pane iyi link iripazasi.)
Chikumbiro chakatumirwa naMiguel Ojeda yechipiri yakagadziridzwa vhezheni yezvinhu zvekusimudzirwa kwevatyairi vemidziyo mumutauro weRust uye umo makomenti akaitwa panguva yekukurukurwa kweshanduro yekutanga yezvimedu zvakabviswa uye izvo Linus Torvalds atojoinha nhaurirano uye akakurudzira kuti achinje pfungwa kuti aite mamwe mashandiro.
Mukati mabhenefiti izvo zvataurwa ndizvozvo kuchengetedza ndangariro manejimendi kunovimbiswa muRust panguva yekubatanidza nguva nekutarisa mareferenzi, kuteedzera chinhu muridzi uye hupenyu hwese hwechinhu, pamwe nekuongorora kurongeka kwekuwana ndangariro panguva yekumhanya.
Ngura inopawo integer kufashukira kudzivirirwa, inoda kusungirwa kwekutanga kweanosiyana maitiro usati washandiswa, zvirinani kubata zvikanganiso muyakajairwa raibhurari, inotora pfungwa yezvinongedzo uye zvisingachinjiki misiyano nekutadza, uye inopa yakasimba static kunyora kudzikisira zvine musoro zvikanganiso.
Nezve shanduko dzinomira yeiyi nyowani vhezheni yezvimedu zvinotaurwa:
Iyo yekugovana ndangariro kodhi inodzivirira mukana wekugadzira mamiriro ekutya kana zvikanganiso zvakaita sekubva mundangariro zvikaitika.
Inosanganisirwa musiyano weRust raibhurari yakapihwa raibhurari, mune iyo kodhi yakagadzirwazve kubata makiyi, asi chinangwa chekupedzisira ndechekuunza zvese zvakakosha zveiyo kernel kune iyo hombe edition yeyakagoverwa (shanduko dzakatogadzirirwa uye ndokuendeswa kune yakajairwa Rust raibhurari).
Panzvimbo pekuvaka kwehusiku, beta uye shanduro dzakagadzikana izvozvi zvinogona kushandiswa rustc compiler kuumba iyo Rust-inogonesa kernel. Parizvino rustc 1.54-beta1 inoshandiswa seyekunyora compiler, asi mushure mekuburitswa 1.54 pakupera kwemwedzi, inozotsigirwa seyekunyora compiler.
Yakawedzera rutsigiro rwekunyora bvunzo uchishandisa yakajairwa Rust hunhu "# [bvunzo]" uye kugona kushandisa dzidziso kushandisa sampuro kodhi kubva kumagwaro seyedzo.
Wakawedzera rutsigiro rweARM32 uye RISCV zvivakwa mukuwedzera kune yakambotsigirwa x86_64 uye ARM64.
Yakagadziridzwa GCC yekushandisa Rust (iyo GCC kumberi kweRust) uye rustc_codegen_gcc (iyo rustc backend yeGCC), iyo ikozvino inopfuura mabhenji ese.
A nhanho nyowani yekubvisa yeRust zvirongwa zvekushandisa kernel michina yakanyorwa muC, senge miti, mareferensi ekuverenga zvinhu, kugadzira faira zvinotsanangudza, mabasa, mafaera, uye maI / O maveji.
Zvinhu zvekuvandudza mutyairi zvakavandudza rutsigiro rwe "file_operations" module, iyo "module!" Macro, macro kutema, uye madhiraivhi emhando yepamusoro (ongorora uye bvisa).
Bhainda ine rutsigiro rwekupfuura mafaera tsananguro uye maLSM zvinongedzo.
Mumwe muenzaniso unoshanda weRust driver, bcm2835-rng, inokurudzirwa kune Hardware isina nhamba nhamba jenareta yeRaspberry Pi mabhodhi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo yechipiri vhezheni yezvimedu zveRust driver driver paLinux yakatotumirwa